WhatsApp ho an'ny KaiOS, ny rafitra miasa izay mitondra ny Nokia 8810 | Vaovao momba ny gadget
WhatsApp ho an'ny KaiOS, ny rafitra miasa izay mitondra ny Nokia 8810 vaovao
Raha toa ka lany WhatsApp ny finday amin'izao fotoana izao dia tsy ao an-tsena intsony. Fa maninona SATRIA antso no tao ambadika tato ho ato. Ny fomba fifandraisan'ny mpampiasa indrindra dia amin'ny alàlan'ny serivisy fandefasan-kafatra mailaka malaza. Ankoatr'izay, ny hafatra am-peo dia milentika lalina amin'ireo mpampiasa.
Iray amin'ireo finday izay an'ny Nokia vaovao aseho ao amin'ny rafitry ny Kongresy Iraisam-pirenena Finday farany teo dia ny Nokia 8810, terminal efa hatramin'ny taona lasa izay nanjary malaza noho ny Keanu Reeves sy ny mpilalao malaza "Neo" ao amin'ny saga Matrix. Eny, amin'ny fiezahana hanararaotra ny nostalgia, namoaka ity modely ity izy ireo saingy teo ambanin'ny rafitra fiasan'ny KaiOS.
Tsy ampoizina ato ho ato ity rafitra fiasa Linux ity. Fa maninona Eny satria avy amin'ny tranonkala WABetainfo Mampahafantatra anay izy ireo fa ny kinova WhatsApp manokana dia novolavolaina mba hahafahan'ny fampiharana mihazakazaka eo ambanin'ity rafitra fiasa vaovao ity ary misy amina terminal maro izany. Na izany aza, ny malaza indrindra dia ny Nokia 8810.
Toy izany koa, ity karazana terminal ity dia mety hidina avy ao ambadika na terminal faharoa ka lasa safidy voalohany amin'ny tranga maro miaraka amin'ity karazana fandraisana andraikitra ity. Ary efa volana maro izay Notaterin'ny WhatsApp fa najanony ny sehatra fanohanana toy ny BlackBerryOS, Windows Phone na Series 40 napetraka tao amin'ny finday Nokia taloha.
Amin'izao fotoana izao tsy fantatra hoe rahoviana no ho vonona ny kinova farany ho an'ny KaiOS. Ankehitriny, azo antoka fa amin'ity vaovao ity dia mihoatra ny iray no vonona handray an'io karazana fitaovana io ho safidy hafa azo atao. Hita ao amin'ity sehatra vaovao ity ny Facebook. Ary ny fikasana, araka ny efa nambara dia: "hanokatra varavarana hanana tombontsoa vaovao amin'ny fanabeazana, orinasa ary fananganana fiarahamonina."
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » WhatsApp ho an'ny KaiOS, ny rafitra miasa izay mitondra ny Nokia 8810 vaovao
Eny, chapeau ho an'ny WhatsApp!
Vao tsy ela akory izay, najanon'izy ireo ny fanohanany anay (mpampiasa Blackberry Classic aho) ho an'ny vitsivitsy milaza fa hifantoka amin'ny sehatra maro an'isa izy ireo ary ho tombontsoan'ny rehetra izany. Ankehitriny dia mieritreritra ny hanao kinova ho an'ny 'mobiles efatra' izy ireo izay hamidy na manao ahoana na manao ahoana Nokias, izay fantatro fa ho kely lavitra noho ireo blackberry, nokias sy ny hafa efa amidy izy ireo.
Rehefa maniry izy ireo dia afaka. Rehefa tsy izany dia avelany any isika.
Izaho dia mpampiasa mahazatra blackberry ary avy eo nankany amin'ny pasipaoro. Androany dia heveriko fa io no rafitra fiasa tsara indrindra raha ny fahitana intuitive, madio ary batterie no resahina, tsy lazaina intsony ny kalitaon'ny fanamboarana.
Heveriko fa nijanona tsy nanohana an'ity rafitra ity ny WhatsApp, satria notsikeraina noho ny fakana tahaka ny patanty fandefasan-kafatra i Facebook ary noho ny valifaty dia nijanona tsy nanohana azy ireo tamin'ny fialantsiny fa tsy misy mpampiasa intsony no mitaky izany.
Amin'izao fotoana izao dia manana elite 3 miaraka amin'ny telefaona windows aho ary io no zavatra akaiky indrindra amin'ny blackberry ary hanohy hampiasa izany aho mandra-pahatongako.
Rehefa mandeha ny fotoana, raha tokony handroso amin'ny haitao dia mihemotra isika ary tian'izy ireo hataontsika adala na amin'ny google na amin'ny ios.
ASUS dia manolotra ny ROG Gladius II Origin, natokana ho an'ny mpilalao